Niteny ny Anjely hoe Teraka i Jesosy | Tantara ao Amin’ny Baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galicienne Garifuna Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Isoko Italianina Kabiyè Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Luo Macua Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Okpé Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Pendjabi Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Poloney Ponape Portogey Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quiché Romanianina Rosianina Rutoro Samoanina Sango Sena Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tandroy Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tiorka Tiv Tojolabal Totonac Tseky Tshwa Tsonga Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Édo Éwé
I Aogosto Kaisara no mpitondra teo amin’ny Fanjakana Romanina tamin’izay. Nasainy niverina tany amin’ny tanànany daholo ny Jiosy mba hosoratana anarana. Nankany Betlehema àry i Josefa sy Maria, satria avy any ry Josefa. Efa akaiky ho teraka i Maria tamin’izay.
Rehefa tonga tany Betlehema ry zareo, dia tsy nahita toerana hipetrahana afa-tsy tao amin’ny tranom-biby anankiray. Tao i Maria no niteraka an’i Jesosy. Nofonosiny lamba malefaka izy, dia napetrany moramora tao anaty fihinanam-bilona.
Nisy lehilahy niandry ondry tany an-tsaha teny akaikin’i Betlehema, tamin’iny alina iny. Tampoka teo dia nisy anjely nijoro teo anoloan-dry zareo, ary nazava be nanodidina an-dry zareo satria niseho ny voninahitr’i Jehovah. Natahotra ireo mpiandry ondry, nefa hoy ilay anjely: ‘Aza matahotra fa hilaza vaovao tsara aho. Teraka ao Betlehema androany ny Mesia.’ Nisy anjely be dia be koa teny amin’ny lanitra tamin’izay, niteny hoe: ‘Voninahitra ho an’Andriamanitra any an-danitra, ary fiadanana eny ambonin’ny tany.’ Dia lasa ireo anjely avy eo. Inona àry no nataon’ireo mpiandry ondry?
Hoy ry zareo: ‘Andao isika ho any Betlehema izao dia izao.’ Nankany haingana àry ry zareo, dia hitan-dry zareo tao amin’ny tranom-biby i Josefa sy Maria ary ilay zanany vao teraka.
Gaga daholo ny olona rehefa nitantaran’ny mpiandry ondry an’izay notenenin’ilay anjely. Nieritreritra be an’ilay tenin’ny anjely koa i Maria, dia tsy hadinony mihitsy ilay izy. Niverina tany an-tsaha ireo mpiandry ondry avy eo, sady nisaotra an’i Jehovah noho izay rehetra hitany sy henony.
“Avy tamin’Andriamanitra no nivoahako sy nahatongavako eto. Tsy tonga araka ny nahim-poko velively aho, fa Izy no naniraka ahy.”—Jaona 8:42
Fanontaniana: Ahoana no nahafantaran’ireo mpiandry ondry hoe teraka i Jesosy, ary inona no nitranga tamin’izay? Iza no hitan’ny mpiandry ondry rehefa tonga tao Betlehema ry zareo?
Lioka 2:1-20; Isaia 9:6
‘Nandinika Lalina tao Am-pony i Maria’
Vao mainka natanjaka ny finoan’i Maria, noho ny zavatra niainany tany Betlehema.
Mbola Tsy Teraka i Jesosy dia Efa Nomem-boninahitra
Nanome voninahitra an’i Jesosy i Elizabeta sy ilay zaza tao an-kibony. Tamin’ny fomba ahoana?
Izy Tokoa no “Nataon’Andriamanitra ho Tompo sy Kristy”
Mety hisalasala isika rehefa mandeha ny fotoana ary mety hihena ny finoantsika. Ampitomboy ny finoanao an’i Jesosy, ilay Mesia nampanantenaina sy Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra.